Amaholide eMorocco ngo-Okthoba: ukubuyekezwa. amanzi kanye nomoya okushisa bawe Morocco
"Inkathi okuphansi" iholide waqala ukuthandwa bayanda phakathi bakithi. Abantu ngisho ethi 'kwakungekho isidingo ukulinda ehlobo, ngoba uma kukhona imali ehlobo Ungayaphi kunoma iyiphi inyanga. " Lapho ukuya eholidini ekwindla? Izinketho zande, kodwa akuwona wonke zinhle ngokulinganayo. Ingabe-ke qualitatively uphumule Morocco ngo-Okthoba? Ulwazi mayelana sezulu abavakashela ekwindla State kuphela kubafundi bethu kulesi sihloko.
umbuso Afrika uvame ukubizwa ngokuthi izwe abandayo nge elishisayo. Into wukuthi Morocco yahlakazeka esishintshashintshayo eziningana zezulu. Northern izindawo ungakwazi ngempela ukuziqhayisa ezilele iqhwa eneziqongo ngasiphi isikhathi sonyaka, kodwa zokungcebeleka ogwini ngezinyanga zasehlobo kungcono hhayi ukuhamba abantu bethutha ukushisa esindayo. Uma uya eholidini e Morocco October, ukunakekelwa okukhethekile kuwufanele ukukhethwa indawo ethile basondele, ikhumbula izidingo zabo siqu futhi ufisa ukuba yokuchitha isizungu ngesikhathi uhambo lwakho. Akubona bonke ogwini yaleli lizwe kungaba ozibongayo isimo sezulu kanye sezulu izimo ezifanayo. Ingxenye, ahambe ngasoLwandle LwaseMedithera, kuthathwa sokuzilibazisa unyaka wonke ukubhukuda sizini ngokusemthethweni uphela ngo-November. Kodwa Atlantic coast - ke Ezokungcebeleka ku fan, ngoba amanzi uhlala cool ngisho ezishisayo zasehlobo. Wesaba ukuthi wenze iphutha kukhethwa indawo i iholide ekwindla? Incwadi amahhotela 4 * no 5 *, ucacise khona elikhulu eliwu-swimming pool yendawo yawo.
lokushisa kwamanzi nomoya
Ibhishi amaholide e Morocco ngo-Okthoba, qiniseka ukushiya izinkumbulo ezimnandi kuphela. Amazinga isilinganiso emoyeni ngesikhathi sasemini +23 ... + 25 degrees, futhi iphuzu kakhulu eningizimu ye isimo angaya-35. Mediterranean futhi uyajabula, ngoba amanzi akusho kuphole ngezansi +21 ... + 19 degrees, okuyinto kwanele ukubhukuda ukhululekile. Noma kunjalo, uma uhlela noNcibijane Morocco ngo-Okthoba, ungakhohlwa ukuletha izingubo ezifudumele, njengoba kusihlwa lapha cool ngalesi sikhathi sonyaka. Ukuthola indlela yakho enkulu ekukhethweni kuka ukuvakasha kuzokusiza uthole okwengeziwe mayelana nokuthi zokungcebeleka ethize. Ngo Casablanca, October 26 ntambama, ebusuku 17 futhi amanzi lifudumeza kuze kufinyelele 19 degrees. A kuthe ukuphola kancane e Agadir, izinga lokushisa nsuku zonke lapha 24, Ebusuku 15, kodwa ulwandle afudumele (21 degrees). E Marrakech, izivakashi zingathola ukubamba imvula ngakanye, izinga lokushisa izinkomba evamile Okthoba: Usuku: 27 16 ebusuku, amanzi degrees 20.
Izici sezulu autumn Morocco
Okthoba ingenye engcono izinyanga uvakashela leli zwe. Ngalesi sikhathi, kukhona njalo libalele, kodwa hhayi hot too. Jabulela kwelanga kungaba mayelana 10 amahora ngosuku. Sicela sedlule eMorocco ngo-Okthoba futhi imvula ngokulinganisela, emvuleni kulesi sikhathi sonyaka ezingajwayelekile, ngokuvamile yesikhathi esifushane neyezinto hhayi luningi. Kulokhu, ogwini uhlale fresh ngenxa ukusondela kolwandle noma olwandle. Enye inzuzo obungenakuphikwa amaholidi ekwindla kuleli zwe - ukuntuleka babekezelele omiyane nezinye izinambuzane igazi-abancela. lokushisa nendawo sezulu emnandi enze kube nokwenzeka ukuba ujabulele inala hambo. izivakashi eziningi ancamela ukuthatha izimoto eziqashisayo, futhi ube ngumnikazi ukuhlola lo muzi izifunda ezahlukene Morocco. Futhi umbono ezithakazelisayo for a holiday. Kukuphi lapho endaweni umbuso owodwa ukuze ubone futhi yinhle amabhishi neqhwa eneziqongo entabeni iphakama, futhi uvakashele omkhulu ogwadule eSahara?
Jabulela bendabuko lolwandle iholide ngo-Okthoba, kuyodingeka bonke abakhetha lonke Morocco. Bathing Kufanele ukhethe ogwini Mediterranean. Kodwa amaningi bethamele ilanga bonke zokungcebeleka eningizimu isimo. Amazinga amanzi e Morocco ngo-Okthoba kuyahluka a degrees ambalwa endaweni eseduze ngasogwini. Ngokuvamile lokhu isilinganiso kuyahlukahluka ngaphakathi 19 + ... + 21 degrees. Qaphela: Amanzi ongayo Atlantic. Beaches e Morocco kudonse amakhilomitha eziyizinkulungwane ezimbalwa kuphela. Uma uthanda ukuba uphumule ogwini - eningi ezahlukeneyo. Engingakusho nje kuleli zwe ngamathuba imisebenzi yangaphandle. Izivakashi eziningi beze lapha ukuze zifezeke surfing futhi windsurfing. Kwakuthinta ngo-Okthoba, isivele kungenzeka ukubamba igagasi eliphakeme, inkathi yabo ezindaweni eziningi kwaze kwaba sentwasahlobo. Surfers ngokuvamile ubuthe Taghazout, futhi windsurfers ukuthola izindawo ezingcono ezilandelayo: Mehdiya, Anchor Point (Agadir) namabhishi, esisuka enyakatho Safi.
Okufanele ukwenze ngesikhathi iholide ekwindla kuleli zwe?
Amaholide eMorocco ngo-Okthoba, ivumela nje kuphela ukujabulela Sunbathing nokubhukuda. sezulu Ezintsha ikuvumela ukuba shí emkhathini yezwe, ukuze simbone nge amasiko alo kanye namasiko. Khetha uhambo ukunambitheka noma iya ohambweni lwabo siqu. Nokho, abahambi ebona ukuncoma ngokuqapha ukuqasha in the ezokuthutha State. Isimo sezulu e Morocco ngo-Okthoba ivumela zonke izinto ezinkulu futhi eziningi zazo lapha. Lo muzi wasendulo, esiyingqayizivele izinto zemvelo kanye namathafa. Ofanelwe ukunakwa izivakashi kanye cuisine wendawo, izitsha eziningi uqiniseka ukujabulisa baseYurophu. Ungakhohlwa ukuthi ekwindla - ngesikhathi sokuvuna. Awunayo uthemba izibiliboco zendawo? Ungahlala ujabulele izithelo nemifino.
izenzakalo ezithakazelisayo iwe
Autumn iholide e Morocco uyophinde vakashela eziningi izenzakalo ezithakazelisayo futhi imisebenzi. Omunye ezithakazelisayo iningi labo - umkhosi ebutha izinsuku sokuvuna, enziwa minyaka yonke e-Erfoud. I iholide luthatha izinsuku ezintathu, phakathi kwesikhathi lapho ungakwazi nje ukunambitha futhi uthenge izithelo ezivuthiwe, kodwa futhi ukuze ubone nemidanso bendabuko, ulalele folk. Imicimbi eminingi nesizotha yokudumisa sokuvuna aphethwe kweminye imizi. Uma uya Morocco ngo-Okthoba, kuyoba mnandi ukuvakashela futhi abantu show e Marrakech, olwenziwa phakathi no-ekwindla. I iTisza ngalesi sikhathi sonyaka sihamba-Equestrian Festival, phakathi kwesikhathi lapho bendawo kufanele sikhumbule ukuthi kuze kube muva nje base abayimizulane yangempela. Purebred amahhashi Arabian, nabagibeli lapho sebegqoke izingubo kazwelonke - ukuvakashela kulesi sehlakalo ngokuqinisekile kuyoba ezithakazelisayo kuwo wonke umuntu.
Izinzuzo amahlamvu ekwindla
Plus iholide e Morocco ekwindla eziningi. Khumbula ukuthi olusemthethweni izivakashi isizini kulelizwe luphela nge Ekuqaleni autumn. Yingakho ukuvakasha eMorocco ngo-Okthoba angathengwa at kwezimo ezimvunayo kakhulu. Nge-Mid-Autumn Festival futhi izindiza eshibhile, futhi izintengo yokuhlala emahhotela. Izindleko ukudla nezimpahla zasendlini ukusetshenziswa nsuku zonke futhi eyamukelekayo. Isibalo izivakashi incipha, ukuze ukwazi ukubona izinto endaweni ukhululekile, kanti cishe zonke ngeke ukuthole.
Izivakashi kwakudingeka isikhathi ukuvakashela Morocco ekwindla, khuluma ngalokhu iholide ngezindlela ezahlukene. Fans of lokushisa eliphezulu plus bathi ogwini kubanda kakhulu ukubhukuda futhi ukuthola tan zemvelo. Kodwa kuzakhamizi zamazwe nesimo sezulu esihle kwamjabulisa ngayo ukuthola ithuba sijabulela imfudumalo yokusekelwa endlini baqala esilandela umkhuhlane nasodakeni. Uma uya eholidini eMorocco, ebhishi ngamaholidi ngo-Okthoba ayikwazi ukulungisisa bonke okulindele. Qiniseka ukwakha izinhlelo esekelwe sezulu indawo ethile. Khokha futhi ukunakekela okukhethekile iqoqo amapotimende umphako wendlela, kuyakuba ibelula futhi efudumele izingubo futhi kudingekile - Izicathulo. Cishe zonke kuyiwe Morocco (Okthoba) Unezibuyekezo omuhle ngokuntuleka inqwaba izivakashi kanye namanani aphansi. Autumn amaholide kuyoba ishibhile esingaphezu konyaka ngesikhathi ibambene isizini izivakashi. Ngesikhathi ukuzijabulisa zokungcebeleka amathuba afanayo lolu hambo inikeza lokungekho ngephansi.
Volgograd, ibhasi: lwezikhathi. Imizila of minibuses Volgograd
Metro "Sukharevskaya" - i zokuthutha ezibalulekile yedolobha elikhulu
Inhloko-dolobha ye-Montenegro kanye zalo ezikhangayo ezinkulu. Podgorica: omisiwe idolobha
Yeisk, impesheni sea ukudla: incazelo kanye nezithombe
Kufanele yini ngiye Dubai ngoDisemba? sezulu Minute, izinga lokushisa lamanzi, ukubuyekezwa
Lapho Turkey wakhona ufudumele ngo-Okthoba? Turkey, iholide ngo-Okthoba: Izibuyekezo
Fingerprint: izinhlobo kanye izinhlobo
Indlela ukuqopha ingxoxo ku-iPhone nge isofthiwe nangaphandle amadivayisi
Kungani phansi kuyanda kukaStalin emva XX Congress?
Karelian Bear Inja. Izici ukunakekelwa nemfundo
IMpi Yezwe Yokuqala: kafushane mayelana main
Inethiwekhi yezitolo "CenterObuv". Izibuyekezo zabavakashi
Georg Simmel: A Biography. Ifilosofi Georga Zimmelya
Ukulungiswa in the yokugezela
Isici atherogenic ephakanyiswe: kuyini? Ukudla lenyuka isici atherogenic
Ukuthuthukiswa izicelo ephathekayo iphone